यस मेनुमा आदेशहरू समावेस छन् जुन पुरै कागजातमा लागू हुन्छन्, नयाँ कागजात खोल्नुहोस् वा अनुप्रयोग बन्द गर्नुहोस्।
नयाँ LibreOffice कागजात सिर्जना गर्दछ ।
अहिले भर्खरै खोलिएका फाइलहरू सूचीकृत गर्दछ । सूचीमा फाइल खोल्नका लागि, यसको नाम क्लिक गर्नुहोस् ।
कार्यक्रम निस्काशन नगरीकन हालको कागजात बन्द गर्दछ ।
व्यवसाय र व्यक्तिगत चिठ्ठिहरू, फ्याक्सहरू, एजेण्डाहरू प्रस्तुतीकरणहरू, र अरू सिर्जनाद्वारा तपाईँलाई गाईड गर्दछ ।
पुन: लोड गर्नुहोस
अन्तिम बचत गरिएको संस्करण सँग हालको कागजात बदल्नुहोस।
हालको कागजात बचत गर्दछ ।
को रूपमा बचत गर्नुहोस्
सबै बचत गर्नुहोस्
सबै खुला LibreOffice कागजात बचत गर्दछ । यो आदेश दुई वा त्यो भन्दा बढी फाइलहरू परिमार्जित गरिएमा मात्र उपलव्ध हुन्छ ।
हालको कागजातलाई फरक नाम र ढाँचाले तपाईँले निर्दिष्ट गर्नुभएको ठाउँमा बचत गर्दछ ।
पीडीएफको रूपमा निर्यात गर्नुहोस्।
हालको कागजातको प्रतिलिपि फरक अनुप्रयोगहरूमा पठाउँछ ।
हालको फाइलका लागि गुणहरू जस्तै फाइल सिर्जना गरिएको मिति र शब्द गणना गरिएको तथ्याङ्क समावेश गर्दै प्रदर्शन गर्दछ ।
तपाईँको कागजातबाट डिजिटल हस्ताक्षरहरू थप्दछ वा हटाउँदछ. तपाईँले प्रमाणपत्रहरू हेर्न संवाद पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
Title is: फाइल